Ka soo baxa isbataalka waa arrin dhextaal oo ay dhameyn karaan waalidka iyo takhtarka hooyada iyo takhtarka cunuga. Si toos ula hadal takhtarka haddaadan raali ka ahay qorshaha isbaaltka looga saarayo. Mar alla markaad guriga aadid, waxaad u baahantahay qorshe wargelin caafimad iyo qof aad soo wacdid haddey dhibaato dhacdo. Markaad gurigaaga aadid, waxaa laga yaaba iney su'aalo badan kula soo gudbonaadaan. Arrimahani waa kuwo caadi, waana calaamadaha uu leeyahay waalid si daacad raba inu wax u ogaado. Su'aalahaaga meel ku qoro oo diyaar u ahaw inaad shebaarka weydiisid si aad jawaab u heshid. Section Navigation